Why Daw Khin May Than’s husband, ? Dr Toke Kyi ? never sue or announce that he was the first husband ? | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeWhy Daw Khin May Than’s husband, ? Dr Toke Kyi ? never sue or announce that he was the first husband ?
Why Daw Khin May Than’s husband, ? Dr Toke Kyi ? never sue or announce that he was the first husband ?
August 11, 2017 drkokogyi
ဦးနေ၀င်းမြေး အေးနေ၀င်း တွဲနေတယ်
ဘယ်တော့ ယူမလဲ မသိဘူး
Kalar မနဲ့ တွဲနေပြီး
မင်းက မဘသ လာလုပ်ပြနေတယ်လို့
မက်ဆေ့ရော ပို့စ်ရော ပေးပြီးတင်တာ
အဲ့ဒီကောင်မလေးရဲ့ ပုံစံ ၁၀ တွေရော
ဂျူးတဲ့ ကွ လို့ ဆိုတယ်။
သူနဲ့ကျမှပဲ ဂျူးက တရုတ်ဖြစ်သွားတာ ..မရီကြနဲ့
ကျနော် မနုသဗေဒ တကယ်ကို လေ့လာခဲ့တာ
ဂျူးအစ Kalar ကပဲ သိတယ် ။။
သူက မသိပဲ မိုးပေါ်ထောင်မပစ်ခိုင်းတဲ့ အကြောင်း
ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ဦးထွန်းကြည်က…ဟေ ဟုတ်လားမောင်ရင်တဲ့။။။။
ကျနော်ထင်တယ် အေးနေ၀င်းက ပျော်တတ် နောက်တတ်ပြီး
ပေါက်တတ်ကရ ပြောတတ်တာ အရင်ကမသိဘူး။။။
ခုလည်း ရက္ခိုင်ကိစ္စ သူပြောချင်လို့ အငိတာဗျူးချင်လို့
ဂျာနယ်တိုက် ၂ ခုကို ဖုန်းဆက်နေတယ်။
သူက မေ့တတ်သလားပဲ နောက်တာလားပဲ
သူ့အဖိုးလက်ထက်မှာ ရက္ခိုင်က ဆန်ပြသနာ အေ၇းခင်းကို…
သတိပေးရင်း ကျနော်လည်း နောက်လိုက်တာပါဗျာ……
← “No” increase in checks on doctors, says ministry
Selayang Myanmar Muslim Fusal FC ပထမဆု ဆွတ်ခူးရယူစဉ် @ ကျော်သူပရဟိတလူမှုကွန်ယက် ဖူဆယ်ဘောလုံး ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲ မလေးရှား →
2 thoughts on “Why Daw Khin May Than’s husband, ? Dr Toke Kyi ? never sue or announce that he was the first husband ?”
Min Soe ကိုအေးအောင်ဝင်း ကကျွန်တော်နဲ့ ညီအကို လိုနေခဲ့သူပါ သူကို ဆက်ဆံရာတာဗိုလ်ချုပ်သားနဲ့မတူပါဘူး သူကဦးထွန်းမြတ်လမ်းနေတယ် ကျွန်တော် ကဖိုးစိန်လမ်းနေတယ် သူ နဲ့ဦးသာဝင်း(ရှေ့နေ)သား မိန်းမလျာတွေနဲ့ က သူအိမ်ထောင်ရေးပြိုကွဲ ခဲ့ရတဲ့အတွက် အဆင်
နောက်တော့ အရက်ရဲ့ ဒဏ်နဲ့ လောကကိုကျောခိုင်းသွားတယ် ကိုအေးအောင်ဝင်းက ဒေါ်တင်တင်သားအငယ် ကိုငွေစိုးညီ ဒေါ်တင်တင် က ဖိုးစိန်လမ်းခြံ ၂၈ မှာနတ်ကရင်းက ကွယ်လွန်သွားတယ်
Soe Naing ဒေါ်တင်တင်နတ်ကရင်းဦးဏှေက်သွေးကြောပြတ်
Min Soe မမြတ်မွန် က ဦးထွန်းမြတ်လမ်းခြံ ၃၁ က ပါ
Chit Oo Mg အဲထက်​အရင်းက
ဖဆပလခေတ် မြန်မာ့တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦး စီး ချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်းဟာ အိမ်ထောင် ရေး ဖောက် ပြန် မှုတစ်ခု ကျူးလွန်ခဲ့ ပါတယ်။ အိမ် ထောင် လက်ရှိ အမျိုး သမီး ဒေါ်ခင် မေသန်း (ကစ် တီဘသန်း) နဲ့ တရား ဝင် လက်ထပ် လိုက် တာ ပါပဲ။ ဒီကိစ္စ အတွက် ဒေါသ ထွက်ပြီး အရေး ယူဖို့ လုပ်နေ တဲ့ဝန် ကြီးချုပ် ကို ဦးဗဆွေ၊ နဲ့ ဦး ကျော် ငြိမ်း က ဖျောင်းဖျ ကြရ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လည်း သူတို့ နှစ်ဦး ကို ကျေးဇူး ဆပ်တဲ့ အနေနဲ့ သူအာ ဏာ ရ လာ ချိန်မှာ ထောင်ထဲ ပို့ခဲ့ ပါ သေး တယ်။ ဗိုလ်ချုပ် ကြီး ရဲ့ လက်ရှိ ဇနီး ဒေါ်တင်တင် ကလည်း သူသာ လျှင် တရားဝင် မယား ကြီးဖြစ်ကြောင်း ကြေညာ စာ ကို ဗမာ့ ခေတ် သတင်းစာ မှာ ထည့် ခဲ့ ပါတယ်။ ဘယ် သတင်းစာ ကမှ မထည့် ရဲတဲ့ စာကို ဗမာ့ ခေတ်က ထည့် ခဲ့ တာပေါ့ ခင်ဗျာ။ ဒါကြောင့် ဗမာ့ ခေတ် ဦး အုန်း ခင် ဟာလည်း ဗိုလ်ချုပ် ကြီး နေဝင်း ရဲ့ အညှိုး အတေး ထား ခြင်း ကို ခံခဲ့ ရတယ် ပေါ့။
Credit to Yaw Sayar Gyi